Xinhua Myanmar - မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း)နာဂျစ်၏ ဇနီးအား အဂတိလိုက်စားမှုစွဲချက်များအပေါ် ခုခံချေပရန် အမိန့်ချ
ဝန်ကြီးချုပ် မလေးရှား နာဂျစ်
အမှုရင်ဆိုင်နေရသော မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း) နာဂျစ်၏ ဇနီး ရို့စ်မာ(Rosmah) ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ တရားရုံးချုပ်မှ ထွက်လာသည်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၀ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ရိုစ့်မာအပေါ် တရားစွဲထားသော အမှုသုံးခုအား ပဏာမထွက်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ကာ ရုံးတင်စစ်ဆေးရာတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့စွဲချက်များအပေါ် ခုခံချေပရန် ကွာလာလမ်ပူတရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး Mohamed Zaini Mazlan က အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှုရင်ဆိုင်နေရသော မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း) နာဂျစ်၏ ဇနီး ရို့စ်မာ(Rosmah) ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ တရားရုံးချုပ်မှ ထွက်လာသည်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၀ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရားခံဘက်က ခုခံချေပမှု လျှောက်လွှဲချက်ပေးရန်အတွက် တရားရုံးက ဇွန် ၉ ရက် မှ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အထိ ရုံးချိန်းရက်များ ညှိနှိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Wife of former Malaysian PM Najib to enter defense on corruption charges
KUALA LUMPUR, Feb. 18 (Xinhua) -- Rosmah Mansor, wife of former Malaysian Prime Minister Najib Razak, was ordered to enter defense on Thursday for corruption charges related toasolar power project for rural schools.
Kuala Lumpur High Court judge Mohamed Zaini Mazlan ordered Rosmah to enter her defense after finding the prosecution succeeded in provingaprima facie case against her on three charges. The court set several dates from June9to July 15 for the defense stage of the trial. Enditem
Rosmah Mansor (C), the wife of former Malaysian Prime Minister Najib Razak, leaves the court in Kuala Lumpur, Malaysia, April 10, 2019.
Previous Article အီရန်နိုင်ငံ သမ္မတက နျူကလီးယားလက်နက်များကို ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန်မရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြား
Next Article ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်တင်ပို့မှုမှ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိခဲ့